DAT Video Editor: Sida loo Edit DAT Video Files
> Resource > Video > Sida loo Edit DAT Video Files
Waxaa laga yaabaa in aad leedahay badan oo DAT videos oo aad rabto inaad iyaga wax ka bedel u isticmaalo. Tutorial halkan aad ku socon doonaa, iyada oo loo marayo tallaabooyin faahfaahsan DAT tafatirka video files. Marka hore, waxaad u baahan tahay editor ah DAT awood badan weli si sahlan loo isticmaalo si aad u kaaliyaha. Halkan, si toos ah ayaan ku talin sida weyn hal - Wondershare Filmora (Originally Wondershare Video Editor) ( Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) ). Waxay ka dhigi kartaa wax fudud oo degdeg ah si aad u xaalkaa files DAT la music, sawiro iyo saameynta kala duwan, kala guurka iwm dibna waxa ha idin ​​badbaadin galay qaabab video badan oo caan ah sida MP4, AVI, wmv, FLV, MKV, 3GP oo dheeraad ah loogu talagalay share on iPhone, iPod, iPad, PSP, Zune, iyo YouTube iwm
Maxaad Dooro Wondershare VOB Editor
Tani video editor M4V socodka hawsha oo idil video tafatirka badan sahli. Qorshahaa waxa dareen leh ka dhigayaa dhammaan fursadaha tafatir ah u fudud in ay helaan dhammaan dadka isticmaala ku.
Waxay bixisaa dhammaan qalabka video tafatir sida goo, isku shaandheyn, dalagga, gooyaa oo dheeraad ah. Waxa kale oo aad qabsato karaa goobaha video sida mugga, xawaaraha loo maqli karo si loo hagaajiyo tayada video.
Cajiib ah Video Raadka
Ku dar-guurka ee laga cabsado, Intro / credit, koobab iyo sida diirada si aad M4V videos. Saamaynta Advanced sida PIP, Janjeeri-wareeg, Jump gooyaa oo dheeraad ah oo sidoo kale la siiyaa.
Kala duwan Sharing Siyaabaha
Aad loo sahlo in ay la wadaagaan oo ay ku biiraan aad videos meel kasta, si toos ah u geliyaan gal YouTube iyo Facebook, ka dhigo kuwo la socon kara qalabka kale, gubi ururinta DVD ah.
1 dar DAT video files si album this app ee User ee
Ka dib kuu soo ordi this smart DAT video editor, waxaad u baahan tahay in aad soo dhoofsadaan DAT video files u tafatirka. Riix ah "Import" button on geeska kore ee bidix ee interface ugu weyn, ka dibna browser your computer iyo xulo doonayay DAT videos inay ku shuban. Ka dib markii in, ay la soo daabici doonaa in this app ee User ee Album.
2 Edit DAT video files
Si aad u sameeyo, marka hore, waxaad u baahan tahay inaad jiidi videos DAT aad rabto in aad mid mid ka Album in ay Timeline ah. Iyo in la hubiyo ay qorsheysay in Timeline oo ay si play ah.
Editor video DAT - wada geeyo video clips
Haddii aad rabto in aad ku biiri laba ama dhowr DAT video clips, waqtigan, waxaad si toos ah u dhoofin karaan file cusub ee soo socda tallaabadii u dambaysay.
Editor video DAT - jar video clip ah
Haddii aad rabto in aad dibnaha jar video in qayb aad rabto in aad ka, kaliya muujiyo clip video in Timeline ah, jiidi sare ee cas Time Tusiyaha in aad boos doon doonayay, ka dibna ku dhuftay "maqas" button in googooyeen oo dhowr clips. Delete aad clips aan loo baahnayn oo kaliya mid ka mid sax ah.
Editor video DAT - Dalagyada, isku shaandheyn, bedesho video & saamayn audio iyo video xawaaraha
Midig u guji doonayo aad video clip in Timeline ka dibna dooro ikhtiyaarka Edit. Oo waxaad ka heli kartaa qaar ka mid ah qalabka tafatirka caadiga ah: isku shaandheyn, dalagga, videos xawaaraha iyo isbedelka video saamayn. Si aad u tirtirto ama wax ka bedel track maqal, oo kaliya xaq u riix video clip ka dibna dooran halkii "Audio fuji" doorasho,
(Ikhtiyaar) DAT VIDEO editor - dar Muuse ah, Jump Goo, Janjeeri-Shift, iyo Face-off
Si aad u codsato saamaynta sida Muuse, Jump Goo, Janjeeri-Shift, iyo Face-off, waxaad xaq u riixi kartaa video clip ee Jadwalka ka, ka dibna tag ah "Power Tool" doorasho.
(Ikhtiyaar) DAT video editor - Codso qoraalka, PIP, kala guurka, audio iyo Intro / credit iwm
Haddii aad rabto in aad video shakhsiga, waxa kale oo aad ku dari kartaa qaar ka mid ah xubno ka shaqsinimo sida qoraalka, PIP, kala guurka, audio, Intro / credit iyo wixii la mid ah. Si taas loo sameeyo shaqo, waxaad ku dhuftay aad feature menu doonayo in interface ka galo maktabadda khayraadka baahisey. Markaas, si toos ah jiidi template aad maktabadda si clip video in Timeline ah. Ugu dambeyntii, aad edit karaa template in aad ka jeelahay.
Fiiro gaar ah: Haddii loo baahdo, waxaad sidoo kale gudbin karaan Hanuuniye faahfaahsan oo dheeraad ah DAT VIDEO Editor ee tafatirka, Users Guide of Video Editor .
3 dhoofinta aad videos cusub
Ka dib markii tafatirka, kaliya ka dhacay badhanka "Abuur". Waxaa jira afar hab oo aad dooran kartaa in aad badbaadin abuurkiinna: Device, Qaabka, YouTube iyo DVD. Kaliya dooro mid kasta oo aad rabto in aad u dhoofiyaan aad videos cusub